South Africa Inosimbisa Mutemo weKudzivirira Kupararira kweCovid-19
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa
Mutungamiriri wenyika yeSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, nezuro manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kweCovid-19, kana kuti Lockdown Level 4, kwemazuva gumi nemana ari kutevera.
VaRamaphosa vakati vatora danho iri senzira yekuderedza nayo kutekeshera kwedenda reCovid 19, iro rauraya vanhu vapfuura makumi mashanu ezviuru, kana kuti 50,500 munyika yavo pari zvino.
Asi matanho aya anonzi nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe achaita kuti zviomerwe nehupenyu zvakanyanya, zvekuti vamwe vave kutofunga kumbodzokera kumusha. Mutori wedu wenhau, Moreblessing Munjoma, anotipa nyaya iyi....
Matanho aya, anosanganisira kupfekwa kwema mask nguva dzose, kuvharwa kwenzvimbo dzinotengesa pamwe nekunwira doro, kurambidza kuungana kwevanhu pamwe nekusimbisa mutemo unorambidza kufambafamba kwevanhu zvisina chikonzero kubva neguva dzesere manheru kusvika nnguva dzeina mangwanani ezuva rinotevera..
South Africa ndeimwe yenyika dzepasi rose iri kutora matanho akadai mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chaura vanhu vave kuda kusvika mumamiriyoni manauye kubata vamwe vanodarika mamiriyoni zana nemakumi masere, kana kuti 180 million pasi rose.
Danho reSouth Africa iri rinonzi raita kuti dzimwe nyanzvi mune zvedzidzo pamwe nemhuri yeZimbabwe vanogara nekushanda munyika iyi vayambire mhuri yeZimbabwe iri kumusha kuti kana ichifunga zvekuenda kuzogara kana kuzotsvaga chouviri muSouth Africa inyatsofungisisa nezvazvo.
Vanhu ava vanoti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kweCovid-19, izvo zvaita kuti makambani akawanda apfike mikova.
VaAmos Moyo, vanove nhengo yebato reMDC asi vachitaura vakazvimiriria, vati South Africa pari zvino yangove nyika isina zvikuru zvainopa nekuda kwemamiriro aita zvinhu zvhcikonzerwa nedenda iri.
VaTrust Nhete, nhengo yeProudy263, sangano revemabhizimisi emhuri yeZimbabwe achiri kusimukira muSouth Africa, vanoti iye zvino mhuri yeZimbabwe iri munyika iyi yave kuzotambura zvino siririsa nekuda kwekuomeswa kwemutemo unodzivirira Covid-19 uyu, uyo vanoti uchatadzisa vakawanda kuwana cheuviri.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, VaAlois Nyamuranga vanoti vave kufunga zvekutombodzokera zvavokumusha, naizvozvo, vave kungoshandira kuti vawane mari yekuti vabatsirikane kana vadzokera kumusha, kunyange hazvo South Africa isiri nyika yoga iri kutora matanho aya.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology, Doctor Rick Mukonza vatsigirawo mashoko aya vakati mhuri yeZimbabwe muSouth Africa, ngaitambe yakangwarira.
Asi Doctor Mkonza vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo aya ariwo maomere aita zvinhu muSouth Africa, pachine mukana kune avo vanopinda munyika iyi vachizotenga zvekutengesa kuti vawane pundutso.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, chinoimba chiri muSouth Africa, uyewo ari mwana wemushakabvu James Chimombe, muimbi akaita mukurumbira, Davida Chimombe, akurudzirawo vaimba vari kumusha kuti vafunge zvakadzama vasati vauya kuSouth Africa sezvo mararamirao acho aoma kudarika zvaaive akaita Covid-19 isati yapararira.
South Africa, ine zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamironi matatu, zvizhinji zvacho zviri kutarisana nematambuziko akasiyanasiyana.
Pavanhu ava, kune vanosvika 180 000 vakawana magwaro ano vabvumidza kugara nekushanda munyika iyi, ano zivikanwa kuti maZimbabwe Exemption Permits.
Asi magwaro aya achange asingachashandi, kubva musi wa 31 Zvita gore rino izvo zvave kushaisa veruzhinji mufaro.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze kwenyika zvinonzi ndizvo zviri kupinza mari yekunze yakawanda muhupfumi hwenyika.
Naizvozvo, kana zvinhu zvaita manyama amire nerongo kudayi munyika yeSouth Africa, zvinoreva kuti mhuri zhinji dziri muZimbabwe dzichatarisana nenguva yakoma.
Pari zvino nyika yeSouth Africa, inoti yakabaya nhomba, vanhu vanosvika mamirioni maviri nemazana manomwe ezviuru, kana kuti 2.7 miillion.